4-Talaabo Oo Kuu Horseedaya Dareen Farxadeed Maalintii Oo Dhan | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » 4-Talaabo Oo Kuu Horseedaya Dareen Farxadeed Maalintii Oo Dhan
4-Talaabo Oo Kuu Horseedaya Dareen Farxadeed Maalintii Oo Dhan
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 31-07-16 8:22 PM Dareeka qofku waa shay sidii Bam uu ku taaganyahay oo kale , waxaa dhici karta in saaxiib kula noqdo dareenka wanaagsan ama uu cadowgaaga kowaad kuu ahaado , suurogal maaha inaad ka fogaato dareenka xun sida ; carada , walwalka , …, maxaa yeelay Marka aad mar dareento waxay kugu reebayaa xasuus xun waana arinka dareenkeena badala markasta, dareenka xun iyo caadifaduna ma kala haraan oo waa mataano , laakiin afar tallaabo uu soo bandhigay wargeyska ” Live Heck” ayaa inoo sahlaya inaan dareenka xun iska cayrinno isla markaan aan u badalayno dareen wanaagsan oo quruxbadan oo aan ku naaloonno maalintii oo dhan.
Dareenka Wanaagsan muujiso Markasta: waxay kuu suuro gala ah inaad dareenkaaga kula dhaqanto sidii inuu yahay weel oo kale waxaan doonto aad ku shubaneysid, waxaan uga faa’idaysan karnaa inaan dareen wanaagsa ka buuxinno oo aad ku raaxaysan karto farxadna aan ku dareemi karno maalintii oo dhan.
Dareenkaaga Cusbooneysii subax kasta : 10 daqiiqo waxaad siinaynsaa jimicsi , 10 daqiiqo oo kale waxaad qoreysaa fikirkaaka oo aad kusoo bandhigayso Yoolkaaga nolosha iyo halka aad tiigsanayso mustaqbalka , kadib samada eeg ama sawir quruxbadan adigoo si wanaagsa u neefsanayo.
Samee Jimicsi yar oo khafiif ah inta aadan seexan kahor: waxaa fiican inaad samayso hurdada ka hor jimicisga kuugu fudud ee aad samayn karto, iftiinka ayaad yareynaysaa adigoo buuq ka fogaanaya , fikirka xun oo dhanna waad iska ilaalinaysaa adigoo maskaxdaada ku haysanaya wax wanaagsan oo kaliya isna xasuusinaya meel wanaagsan oo aad booqatay , isbadal kugu dhacay noloshaada si dagdag ah ayaad u dareemaysaa.
Dadka naftaada oo kale kasoo qaad : dadka saaxiibada ah ee meel wada jooga way is yara af-gaaryaan oo carab iyo adinba way isgaaraan , hadaba marka aan dadka u caraysanatahay aragtidaada oo qura wax haku xukumin , dadka kale oo aad fikirkaaga ku xukuntaa waa arinka niyad xumada dhaliya , laakiin marka aad naftaada kasoo qaado booska saaxiibkaa oo kale xalku wuu imanayaa , dareenkaaguna wuu is badalayaa oo waa la hubaa .